प्रिस्क्रिप्शन बिना डाइट पिलहरू खरीद गर्नुहोस्! फिट हुने वेटलोस अनुभव गर्नुहोस्!
आज, तौल घटाउन वजन घटाउने औषधीहरू प्रयोग गर्ने प्रलोभन बलियो र प्रतिरोध गर्न कठिन भएको छ। जे होस् स्थायी वजन घटाउने आधारभूतहरू कम र स्वस्थ खाँदै छन् र बढी बढ्दै छन्, बजारमा उपलब्ध उत्तम वजन घटाउने औषधिहरूले केही व्यक्तिहरूलाई तौल घटाउन मद्दत गर्दछ। तिनीहरू एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ जो आफ्नो वजनको कारण गम्भीर स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त छन् र मानिसहरू जसले डाइटिंगले काम गरेनन्। यी डाईट पिलहरूले उत्तेजकहरू र बिभिन्न अन्य सामग्रीहरू समावेश गर्दछ जुन भूकलाई दबाउन सक्छ र मेटाबोलिक दर बढाउन सक्छ। स्वास्थ्य खाद्य स्टोर, स्थानीय औषधि पसल र सुपरमार्केटमा धेरै वजन घटाउने औषधीहरू उपलब्ध छन्, र ती अनलाइन पनि उपलब्ध छन्।
डाइट पिल्स: तपाईंले कहिले यसलाई विचार गर्नुपर्छ?
यदि तपाइँ यदि प्रिस्क्रिप्शन डाइट पिल तपाइँको लागि केहि हो भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। तपाईंले विचार गर्नु पर्दछ कि खाना पिलहरू प्रायः ती व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरिन्छ जुन बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) 30० बर्ष भन्दा माथिको छ र जसको तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्वास्थ्य छ। यदि तपाईं मोटापा-सम्बन्धित सर्तहरू राख्नुहुन्छ र तपाईंको BMI २ above वा माथिको छ भने एक पर्चेको डाइट पिल पनि सिफारिस गर्न सकिन्छ। साथै, पर्चेको डाइट पिलहरूले कडा पदार्थ समावेश गर्दछ र सामान्यतया केवल अल्पकालिन प्रयोगको लागि सिफारिश गरिन्छ र सामान्यतया चक्रमा वा केही हप्तादेखि केहि महिनामा लिन्छन्।
तपाईको बडी मास इंडेक्स के हो?
बडी मास इंडेक्स तपाईंको उचाईसँग सम्बन्धित तपाईंको वजन हो। एक स्वस्थ व्यक्तिको २ BM भन्दा कम बीएमआई हुनुपर्छ। २-25--27 को दायरामा BMI हप्ताको आधा पाउन्ड वजन घटाउन दिनको 35००--300०० क्यालोरीले क्यालोरिक सेवन कम गर्नुपर्दछ। BM 500 बर्ष भन्दा माथि बीएमआई भएका व्यक्तिहरूले हप्तामा १-२ पाउन्ड गुमाउनुपर्नेछ, 35००-११,००० क्यालोरीको क्यालोरिक कटौतीको साथ।
के वजन घटाउनु तपाईंको स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि एक उपचार-सबै छ? पूर्ण रूपमा होइन, तर यसले गम्भीर रोग र मृत्युको समस्याहरूलाई आमूल रूपमा कम गर्न सक्छ। वजन घटाउन रक्तचाप सुधार गर्न, लिपिड र ग्लुकोजको स्तर स्थिर गर्न, वयस्क सुरुवात मधुमेहको घटना र लक्षणहरू कम गर्न, र हृदयघात र कार्डियो-भास्कुलर रोगको सम्भावना कम गर्न प्रमाणित भएको छ।
वजन घटाउने औषधीहरू निरन्तर तौल घटाउनको लागि सब भन्दा चाँडो र प्रभावशाली औषधी हो। वजन घटाउने औषधीहरू चिनी र कार्बोहाइड्रेटमा कम भोजनको साथ हुनुपर्छ। आधारभूत खाने बानीहरू परिवर्तन गर्ने र चिनीको खपतलाई घटाउने प्रतिबद्धता बिना डाईट पिल्स एक्लो प्रभावकारी हुन सक्दैन।
बजारमा उत्तम डाईट पिलहरू: कुन वजन घटाउने गोलीहरू छन्?
त्यहाँ उपचारका तीन मुख्य कोटीहरू छन् जुन मोटो र बढी तौल भएका र अधिक वजन कम गर्न मन पराउने पुरुष र महिलाहरू द्वारा प्रायः प्रयोग गरिन्छ। यी तीन कोटिहरूमा भोक दबाउने, प्रिस्क्रिप्शन फार्म फ्याट ब्लकरहरू, र अति-काउन्टर (ओटीसी) ट्याब्लेटहरू सामेल छन्।
भोक दबाउने - भोक दबाउने सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारका केहि जो अहिले धेरै वजनयुक्त मानिसहरूले टेनुएट र मेरिडिया प्रयोग गर्दछन्। यस किसिमको औषधिले मानव मस्तिष्कको एक निश्चित भागमा ट्रिगर हुने तरीकालाई परिवर्तन गर्ने तरिकालाई परिवर्तन गर्ने हाइपोथैलेमस भनिन्छ जुन व्यक्तिको भोक नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ। भूख दबाउनेहरूले नोरपाइनफ्राइन र सेरोटोनिनलाई अवरुद्ध गर्न पैदा गर्दछन् जसले वास्तवमा व्यक्तिको शरीरलाई यस्तो महसुस गराउँदछ कि उनीहरूले ठूलो खाना खाए जस्तो छ, जब वास्तवमा उनीहरूले खाए सबै थोरै खाना नै हुन्थे। मस्तिष्कसम्म पुग्ने भूक दबाउने निहित समातिने रसायनको तह जति माथि छ, एक व्यक्तिले भरिपूर्ण भएको अनुभूति महसुस गर्दछ, जसको अर्थ उनीहरूले कम खानेछन्। मोटोपनाबाट पीडित व्यक्तिहरूका लागि के लाभदायक हुन सक्छ जुन यी ट्याबहरू प्रयोग गर्दछ जब निश्चित प्रकारका खाद्य पदार्थहरू खाइन्छन्, तिनीहरू भोका नभएको प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्न भूख दबाउनेसँग संयोजनमा काम गर्दछन्। के यस कार्यको बारेमा कत्ति ठूलो हो यो एक कम क्यालोरी आहारमा गर्न सकिन्छ जुन स्वस्थ खाना छनौटहरू समावेश गर्दछ।
पर्चा फाराम फ्याट ब्लकरहरू - यस प्रकारको डाइट पिलिसले लाइपासको बिरूद्ध काम गर्दछ, जुन शरीरमा पाइने इन्जाइम हो। सामान्य प्रक्रिया जुन शरीरको प्रणालीले प्राय: प्रदर्शन गर्दछ फ्याट पठाउनु जुन खाद्य उत्पादोंको एक विस्तृत विविधताबाट व्यक्तिको पाचन प्रणाली र आन्द्रा मार्गमा खपत हुन्छ। जब यी ट्याब्लेटहरू प्रयोग गरिन्छ, तब उपभोग भएको फ्याटको एक निश्चित मात्रा बरु द्रुत रूपमा व्यक्तिको शरीरमा पार हुन्छ, जसले यसलाई अवशोषित हुनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ।
ओभर-द-काउन्टर (OTC) औषधिहरू - त्यहाँ औषधीहरूको एक विस्तृत श्रृंखला छ जुन कुनै पनि स्थानीय सुपरमार्केट वा औषधि पसलमा किन्न सकिन्छ, र अनलाइन वेबसाइटहरूमा पनि पाउन सकिन्छ। धेरै भन्दा बढि काउन्टर पिलहरू काम गर्ने तरीकाले शरीरको चयापचयलाई बढावा दिईन्छ र प्रयोगकर्ताको उर्जा स्तर बढाउछ। जब कुनै व्यक्तिको मेटाबोलिज्म बढ्दछ, यसले शरीरको भित्रपट्टि कोषहरू जलाउने क्षमताको कारण पनि बनाउँछ उच्च तहसम्म पुग्न। परिणाम क्यालोरी भन्दा धेरै चाँडो जलाउन शुरू छ। ओटीसी ट्याबहरूमा दुई जना सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामग्रीहरू क्याफिन र हरियो चिया हुन्।
जब तपाईं प्रिस्क्रिप्सन औषधि छनौट गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई आफ्नो डाक्टरको पर्चा चाहिन्छ। यदि तपाइँ बजारमा सबै भन्दा राम्रो डाइट पिलहरू के हुन् भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने यहाँ औषधीहरूको सूची छ जुन बजारमा औषधीको रूपमा बिक्रि गरिन्छ। केवल निम्न पर्चेको गोलीहरूको माध्यमबाट जानुहोस् र तपाईंलाई आफ्नो लागि उत्तम आहार पिलहरू के हुन् भनेर एक विचार प्राप्त गर्नुहुनेछ।